Ciidamada Amaanka Boosaaso oo kala eryay Dad ku banaan baxayay gudaha Magaalada – SBC
Ciidamada Amaanka Boosaaso oo kala eryay Dad ku banaan baxayay gudaha Magaalada
Posted by Webmaster on May 10, 2013 Comments
Gelinkii hore ee maanta gudaha magaalada Boosaaso Xarunta gobolka Bari waxaa ka dhacay Banaanbax ay ka qeyb qaateen dadweyne farabadan oo dhalinyaro u badan, kuwaas oo marayay wadada dheer ee isku xirta garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo bartamaha Magaalada.
Saacadu makii ay ku beegneyd 9:00 subax nimo ee maanta ayaa waxaa la wada dareemay Dadkan oo dhanka Qorax u dhac magaalada ka soo socda kuwaas oo ku qeylinaya ereyo lidi ku ah xukuumada haatan ka jirta Puntland ee uu horkacayo Madaxweyne C/raxmaan Faroole.
Waxaa ka mid ahaa ereyada dadkan ay ku qeylinayeen “hadhaco Faroole, Doonimeyno xisbiyo Been ah, Ciidanka hala siiyo xaqooda” iyo ereyo kale oo ku xardhanaa boorar ay dadkaasi gacmaha kuwateen.
Dadkan Markii ay hor marayeen Garoonka kubadda Cagta Boosaaso waxaa ka horyimid ciidan ka tirsan kuwa Amaanka kuwaas oo u muuqday kuwo loo soo diray in ay ka hor tagaan dadkan banaan baxa sameynayay.
Waxay Baajiyeen Ciidankaas in uu sii balaarto Banaanbaxa, iyo damaca dadkaasi banaan baxayaasha ah oo ay ku gubi lahaayene tayaro gaadiid iyo in ay gooyaan wadada aagaasi marta.
Waxay Ciidamada bilaabeen in ay Rasaas farabadan ridaan, taas oo nooc walba laheyd, waxaana marqura la maqlay rasaasta ka dhacda gaadiidka dagaal oo ay ciidamadu ku kala eryayaan dadkii soo banaan baxtagay.
Dadkii ayaa kala cararay waxaana halkaasi ku soo dhamaaday banaanbixii, waxana wadooyinka gala xaafada laanta Hawada Boosaaso joogay mudo saacad ah ciidamada Amaanka ka dibna isaga ruqaansaday.
Xaaladu waxay ku soo noqotay Si caadi ah, waxii ka dambeeyayna ma jirin wax banaan bax iyo rasaas dhaceysa.
Waxaa xusid mudan in Banaan baxa maanta ka dhacay Boosaaso ay sheegteen abaabulkiisa ururka la baxay Samata bixinta Puntland ee mucaaradka ku ah xukuumada haatan jirta, waxaana kulan saxaafadeed ay qabteen ku sheegeen in Ciidamada Amaanku shacabka u geysteen handadaad kuna kala eryeen xabad aan loogu aabayeelin.
Sikastaba ha ahaatee Banaanbaxa maanta ka dhacay Magaalada Boosaaso waxa uu ku soo beegmay xili la sheegay in magaalooyin ay Qardho ka mid tahay ka dheceen banaan bax ceynkan oo kale ah .